Hamrohealth, Author at hamrohealth
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनमा चित्त नबुझेका स्वास्थ्यकर्मीलाई गुनासो गर्न एक साताको समयसिमा तोकेको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै समायोजनमा चित्त नबुझेको भए प्रमाण आधार र कारण सहित १७ असोज भित्र निवेदन दिन भनेको छ ।
मन्त्रालयले गत ३१ भदौमा गठन गरेको गुनासो व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षरित सूचनामा समायोजनको काम अन्तिम चरणमा भएकाले गुनासो भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले १७ असोज भित्रै निवेदन दिन भनिएको छ । सूचनामा ३१ भदौ अघि गुनासाका लागि निवेदन दिएकाहरुले पुन निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
समायोजनको विषयमा यसअघि पनि स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी संग गुनासो सम्वोधन गर्न भन्दै निवेदन माग गरेको थियो । त्यसबेला झण्डै ८ हजार स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो दर्ता गराएका थिए । तर सो गुनासो पछि भएका समायोजनले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन ।
पछिल्लो पटक भएका समायोजनले गुनासो सम्वोधन नगरेपछि मन्त्रालयको चर्को आलोचना भएको थियो । सोही आलोचना मेटाउन पुन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो ।
‘दिएका गुनासोको वास्ता छैन । कतिपटक दिने हो गुनासोको निवेदन ? यो त अति गैरजिम्मेवार कार्य भयो,’ मन्त्रालयमा भेटिएका एक स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरे ।
मन्त्रालयले भने गुनासो सम्वोधन गर्न लाग्दा समायोजन ढिलाई हुने भन्दै पछिल्लो समय समायोजन गर्दै जाने र गुनासो आए त्यसलाई पनि सकेसम्म सम्वोधन गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ ।
रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाले नगरपालिकामै घरेलु स्यानीटरी प्याड उत्पादन गरी नगर भित्रका माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर छात्राहरुलाई प्याड वितरण सुरु गरेको छ ।
ग्रामिण विजनेश प्रमोशन प्रालि रामेछापको सहजीकरणमा रामेछाप नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका ९ वटै वडाका महिलाहरुलाई घरेलु स्यानीटरी प्याड बनाउने तालिम दिएको थियो ।
तालिममा सहभागी महिलाहरुले बनाएको स्यानीटरी प्याड नगरभित्रका १३ वटा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत छात्राहरुलाई वितरण गरिने ग्रामिण विजनेश प्रमोशन प्रालि रामेछापका अध्यक्ष गुन्ज बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु रुपमै उत्पादन भएको स्यानीटरी प्याड एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि पुन सफा गरेर धेरै पटक प्रयोग गर्न सकिने खालको रहेको रामेछाप नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामशरण पौडेलले जानकारी बताउनुभयो ।
महिनावारी भएको समयमा विद्यालयमा हुने छात्राहरुको अनुपस्थितिलाई घटाउन यो कार्यक्रमले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना खड्काले बताउनुभयो ।
पैसाको अभावमा स्यानीटरी प्याड प्रयोग गर्न बाट नगरका कोहि पनि महिलाहरु बन्चित नहोउन भन्ने उद्धेश्यका साथ नगरले घरेलु स्यानीटरी प्याड उत्पादन र वितरणलाई जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्यानीटरी प्याड रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर १ गोठगाउँको चण्डेश्वरी मावि र वडा नम्बर ३ साँघुटारको हिमगंगा उमाविका छात्राहरुलाई वितरण गरिसकिएको छ ।
अब बाँकि वडाहरुको मावि विद्यालयमा क्रमश वितरण गर्देै जाने उपप्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।
मनोरोग के हो पहिले यसको बारे कुरा गरै, कहिलेकाहीँ वा एक–दुई दिन मुड बिग्रने वा दिक्क लाग्ने जसलाई पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्था डिप्रेसन भने होइन। दुई हप्ता वा दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म मन निराश हुने, दिक्क लाग्ने, शरीर गल्ने आदि भइराख्यो भने डिप्रेसन भएको हुन सक्छ।
डिप्रेसन मनको रोग हो। डिप्रेसनमा मन ज्यादै दुःखी हुन्छ, कुनै कुरामा पनि चाख लाग्दैन र जीउ गल्ने वा थकाइ लाग्ने हुन्छ। यी लक्षणहरुका साथै भोक र निद्रा नलाग्ने, रिस उठ्ने, रुन आउने र छटपटी हुने हुन्छ।
डिप्रेसन मनको रोग भएकाले मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शविद (Counselor) कहाँजानु पर्ने हुन्छ र धेरै बिरामीहरु Psychological Counselor र Psychiatrist कहाँ जँचाउन जाने भनेपछि अप्ठेरो मान्नु हुने रहेछ। डिप्रेसनको उपचार गर्ने क्रममा जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। के कस्तो जीवनशैली अपनाउँदा डिप्रेसन ठीक हुन्छ वा डिप्रेसन रोग लाग्न दिँदैन भन्नेबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
डिप्रेसन किन हुन्छ? (Causal Factors)
किन बढ्दै छ डिप्रेसन?
यसबारे पश्चिमी देशहरुमा धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन्। हालै प्राध्यापक एडवार्ड वुलमोर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन्, उनले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्फ्लेम्ड माइन्ड’मा लेखेका छन्, ‘दीर्घ रोगहरु जस्तै बाथ, सोरायसिस, पेट र आन्द्राका रोगहरु मा डिप्रेसन बढी देखिन्छ। त्यस्तै धेरै मोटोपना, महिलाहरुमा महिनाबारी सुकेपछि, परिवारजनको मृत्यु, बाल्यवस्थामा भोगेका दुःखदायी अप्रिय घटना, शारीरिक चोटपटकहरु र जाडोयाममा सूर्यको प्रकाश र तापको कमीले डिप्रेसन निम्त्याउँछन्। लगातारको तनाव जुन अहिलेको जीवनशैलीले समाजमा बढ्दै छ, त्यसले डिप्रेसन बढाउँदैछ।
डिप्रेसनको उपचार गर्न बजारमा उपलब्ध औषधीहरु त धेरै छन् तर ती औषधी सेवन गर्दा फाइदा हुनुको सट्टा झन् असजिलो भयो भने औषधीले, शायद फाइदा गर्दैन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ दिइएका तरिकाहरु अपनाउन र अभ्यास गर्न सक्नु हुन्छ।
डिप्रेसन हुदा देखिने प्रमुख लक्षण हरू (Major Symptoms of Depression)
*एक्लै बस्न रूचाउने
*अनावस्यक रिस उठनु
*आत्म विस्वास घटदै जानु
*ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ
काममा जोस जागर घटदैजाने
*अनिन्द्रा अथवा धेरै निन्द्रा लाग्नु
अनावस्यक थकान, डर र चिन्ता
*एक्कासि तैल बढनु वा घटदै जानु
*सामाजिक कार्यमा अथवा समुहमा बस्न रूचि घटनु
*जिवन प्रति बोझ महसुस हुनु र
*मर्न मन लाग्नु
(१) शारीरिक व्यायामः शारीरिक व्यायाम ज्यादै राम्रो प्राकृतिक औषधी हो र रोगहरुबाट बच्ने उपाय पनि हो। व्यायाम गर्दा मुटु बलियो हुन्छ र मुटु बलियो हुँदा शरीरका सबै अङ्गमा रगतको प्रवाह राम्रो हुन्छ। अक्सिजन र खानेकुराबाट प्राप्त पोषण तत्वहरु मस्तिष्कलगायत सारा शरीरमा राम्रोसँग पुग्छ। मस्तिष्कका कोषहरुले राम्रोसँग काम गर्छन्। सम्झना शक्ति पनि राम्रो हुन्छ। मानसिक तनाव छ भने घट्छ। व्यायाम गरेपछि शरीरमा स्फूर्ति बढ्छ र मनमा आनन्द आउँछ। शारीरिक व्यायाम नियमित गर्दा डिप्रेसनमा दिइने औषधीले जस्तै काम गर्छन् भन्ने केही अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
(२) ध्यानः हिजोआज ध्यानबारे निकै चर्चा चल्ने गरेको छ। धेरैलाई यसबारे केही न केही थाहा पनि छ। नियमित ध्यान गर्नाले मानसिक तनाव घटाउँछ र धेरै रोगहरुबाट बच्न सहयोग गर्छ भन्ने निश्चित प्रायः छ। मानसिक तनाव नै धेरै रोगको जड हो र तनावको उचित व्यवस्थापन गर्नु भनेकै रोगहरुबाट बच्नु हो भने ‘ध्यान’ मानसिक तनावको व्यवस्थापन गर्ने धेरै राम्रो तरिका हो।सकभर ध्यान गर्ने तरिका राम्रो गरी सिकेर गर्नु उत्तम हुन्छ। त्यसरी सिक्ने अवसर नपाउँदासम्म ढाड सिधा गरेर भुइँमा बस्ने, आँखा चिम्म गर्ने र १५/२० मिनेट जति बिस्तारै लामो श्वास लिने र छोड्नेमा आफ्नो मनलाई लगाउनुहोस्। दैनिक यति मात्र गर्नु भयो भने पनि तपाईंलाई धेरै फाइदा हुनेछ।
(३) आफ्नो मनमा आएका कुराहरु आफ्नो नजिकका, विश्वासिला व्यक्तिसँग सुनाउने गर्नुस्। यसो गर्दा मन हलुको हुनेछ। त्यो सम्भव छैन भने आफ्ना भावनाहरु एउटा डायरीमा लेख्ने गर्नुस्। प्रत्येक दिन २० मिनट यसको लागि समय दिनुस्।
(४) रक्सी पिएर मन शान्त पार्ने प्रयास नगर्नुस्। रक्सीजन्य पदार्थले डिप्रेसनलाई झन् बढाउँछ।
(५) घरभित्र एक्लै टोलाएर, रोएर, कुरा खेलाएर बस्ने नगर्नुस। घरबाट बाहिर निस्कनुस्। साथीभाइलाई भेट्नुस्, वा फोन गरेर भए पनि कुरा गर्नुस्। घरमा तरकारीबारी, फूलहरु फुलाउनुस् वा तिनलाई स्याहार गर्नुस्।
यो उपायहरू आफुले प्रयोग गर्न नसकेमा, मनोपरामर्स (Counseling) र मनोचिकित्सा (Psychotherapy) को सहायताले नकारात्मक सोचाइहरु बदलेर सकारात्मक बनाउन सकीन्छ। नेपालमा अहिले धेरै संघसथा हरूले मनेपरामर्स को सेवा दिइरहनु भएको छ। आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँ मा गएर तपार्इहरूले आफुलार्इ मनोसामाजिक अथवा मानसिक समस्या परेको बेला सहयोग लिन सक्नु हुन्छ। PICS NEPAL एक मनोसमाजिक र मानसिक समस्याहरूलार्इ न्युन र यसको समाधानको लागी निरन्तर सेवा दिदै आएको संस्था हो। मनोसमाजिक र मानसिक समस्या हरू पर्दा हामिलाइ सम्झनु होला। सम्पर्क : 015199735, 9851225495 & 9861442108
काठमाडौं- कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रले फेरि समस्यामा ल्याएको छ। समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यले ९ बुँदे विवरण सामान्यमा पठाएको थियो।
सामान्यले स्वास्थ्यको ९ बुँदे विषयको समाधानसहितको पत्र पठाइसकेको छ। तर, उक्त पत्रपछि स्वास्थ्यमा फेरि समायोजनको समस्या बल्झिने खतरा देखिएको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।
सामान्यले पठाएको ९ बुँदे समाधानको उपायमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्र कर्मचारीको पदनाम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सामान्यले यही आधारमा स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
यो निर्देशनपछि स्वास्थ्यमा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेवसहित अनमीको समस्या फेरि बल्झिने भएको छ। स्वास्थ्यमा ४,५ र ६ तथा ५, ६ र ७ औं तहका कर्मचारीमा शैक्षिक योग्यता र ‘लोकतान्त्रिक’ बढुवाको विवाद छ।
सामान्यले अदालतबाट आदेश लिएका कर्मचारीको हकमा भने अदालतको आदेश अनुसारकै पदनाम कायम गर्न भनेको छ।
सामान्यको नयाँ निर्देशनमा समायोजनका क्रममा पदनाम दिँदा आधार पदका आधारमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले अहेबलाई स्तरबृद्धि गर्दै छैठौँ तहमा लगेपछि एचए र सिअहेबबीचको विवाद चर्किएको हो। एचएको आधार पद पाँचौ तहका हुन्छन्। तर शैक्षिक योग्यताका आधारमा सिअहेबभन्दा एचए माथिल्लो तहका हुन्।
स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या झन्डै ४ हजार छ। निजामती सेवामा भएको लोकतान्त्रिक बढुवा (२४ घ) को सिको गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा राखिएको निश्चित मापदण्ड पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानले स्वास्थ्य सेवामा समस्या ल्याएको हो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनको पालामा सुरु भएको यो व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा फाटो ल्याउने काम गरेको छ।
यो व्यवस्थापछि स्वास्थ्य सेवामा शैक्षिक योग्यता बढी भएका एचएच भन्दा १८ मिहने तालिम लिएका अहेब माथिल्लो तहमा, तीन वर्षे कोर्स पढेका स्टाफ नर्सभन्दा १५ महिने अनमी र ल्याब टेक्निसियन भन्दा असिस्टेन्ट माथि गएका थुप्रै कर्मचारी छन्।
काठमाडौँ, ९ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रोकिएको समायोजन प्रक्रिया छिटै सुचारु हुने जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो सम्वोधन गर्ने विषय देखिएको कन्फ्युजन हटने क्रममा रहेको भन्दै रोकिएको समायोजन प्रक्रिया छिटै सुचारु हुने जनाएको हो ।
समायोजनमा नमिलेका कर्मचारीको गुनासो सम्वोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लिखित आदेश नआएपछि स्वास्थ्यले जारी समायोजन प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
‘सामान्यसंग कुरा भईसकेको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । अब चिठी आज वा भोलि आउँछ होला । त्यसपछि हामीले समायोजन कार्य सूचारु गर्नेछौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने ।
गत असारको १५ देखि शुरु भएको स्वास्थ्यको समायोजनले पछिल्लो समय केही गति लिन थालेकै बेला रोकिएको हो । समायोजन गर्नुपर्ने करीब साढे २७ हजार कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म एक तिहाईको मात्रै समायोजन भएको छ ।
मलाइ पढाउन श्रीमानले दाइ बनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो।
दार्जिलिङबाट एक जना महिला रगत बगेर अस्पताल आएकी थिइन्। पाठेघरमा समस्या भएकोले उनको तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो। विभिन्न कारणले तीन दिनसम्म शल्यक्रिया हुन सकेन। सानासाना छोराछोरी भएकोले आफूलाई केही भइहाल्यो भने ती बच्चाको कसले हेरचाह गर्ला भनेर चिन्ता व्यक्त गर्थिन् ती महिला।। तर दुर्भाग्य, शल्यक्रिया गर्नुअगाडि बेहोस गर्ने बेलामा औषधिको एलर्जीको कारण उनको मृत्यु भयो। त्यो बेलामा उनका श्रीमान्लाई सम्झाउन लक्ष्मीलाई निकै गाह्रो भएको थियो। स्वास्थ खबर बाट साभार।
प्युठान जिल्ला गौमुखी गा.पा.-७, नारिकोट अवस्थित ११ बर्षे बालक सन्दिप सुनार ब्लड क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट ग्रसित छन।एक हप्ता अगाडि बाल कान्ति अस्पतालमा भर्ना भएका सन्दिपलाइ २ दिन अगाडि मात्र अस्पतालले ब्लड क्यान्सर भएको प्रमाणित गरेको हो।
बुवा राजु सुनार र आमा शान्ता सुनारको जेठा सुपुत्रका रुपमा जन्मिएका सन्दीपलाइ यति ठुलो रोग लाग्ला भनेर परिवारले कल्पना सम्म पनि गरेको थिएन।राजु आफैमा अपांग छन। एक हातको मदतले दिनभर मजदुरी गरि परिवारको छाक टार्दै आएका थिए राजु।चार छोराछोरी सहित ६ जनाको परिवारलाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौधौ थियो।जेठो छोरा बढ्ला र छिट्टै कमाउने होला भनेर आश गरिरहेका राजु र शान्ता माथी एक्कासी बज्रपात निम्तियो र सपनाको किरण सन्दिप अस्पतालको बेडमा पुग्यो।
“जहाँ होचो त्यही घोचो” भनेझै अत्यन्तै विपन्न परिवारमाथी यति ठुलो समस्या निम्तियो।आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर भएकाले भोली पैसाकै कारण छोरालाई बचाउन नसकिने होकि भन्ने चिन्ताले राजुलाइ पिरोल्छ।उहाँ संगको भेटमा गुनासो पोख्दै हामीसंग कुराहरु साट्न थाल्नुभयो, “भाइ मेरो दुर्घटना परेको पनि १४ बर्ष भैसक्यो।त्यतिबेला ईन्डियामा मेरो राम्रो कमाइ हुन्थ्यो।तर भाग्यले साथ नदिएपछि कसैको केहि लाग्दो रहिन्छ।हात यस्तो भएपछि घरमै फर्की एक हातले मजदुरी गर्नुबाहेक मसंग अरु विकल्प रहेन”।
अन्तिममा उहाँले आफ्नै छोरा-भाइ सम्झी सहयोग गरि बचाइदिनुहुन अपिल पनि गर्नुभयो।
सहयोगको लागी सम्पर्क नम्बर:
बुव राजु सुनार- 9867675623
सामाजिक अभियन्ता शन्तोस कुवर-9851049837